တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် သြစတေးလျ နိုင်ငံ Perth မြို့ကောင်းကင်ယံတွင် လိမ္မော်ရောင် မီးခိုးလ? - Yangon Media Group
တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် သြစတေးလျ နိုင်ငံ Perth မြို့ကောင်းကင်ယံတွင် လိမ္မော်ရောင် မီးခိုးလ?
Perth ဇန်နဝါရီ ၁၅ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Perth တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ မူဒါလင်အရပ်တွင် တော မီးလောင် ကျွမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် Perth မြို့ကောင်းကင်ယံ တွင် လိမ္မော်ရောင် မီးခိုးလုံးများဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မြို့နေလူထကလည်း တနင်္ဂနွေနေ့တွင် လိမ္မော်ရောင်သို့ ပြောင်းလဲ သွားခဲ့သော ကောင်းကင်ယံကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီး အနောက်သြစတေးလျ မီးနှင့် အရေးပေါ်ဌာန၏ facebook ပို့စ်တစ်ခုအရ မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာ ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ကြရသည်။
မီးညွှန့်များမှာ လေထုထဲသို့ ၃၅ မီတာခန့် မြင့်တက်နေသည်ကို မြင်တွေ့ ရသော်လည်း မီးထိန်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း 9News သတင်းဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
မီးသတ်သမား ၁၅ဝ ခန့် တနင်္လာနေ့အထိ မီးငြှိမ်းသတ်လျက်ရှသော်လည်း အနောက်သြစတေးလျပန်းခြံများနှင့် သားရဲတိရိစ္ဆာန် အဖွဲ့က တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းတွင် မီးသတိပေးချက်မှ အကြံပေးချက်အဆင့်သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။ ဒေသခံများကိုလည်း နိုးနိုးကြားကြားရှိကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ အမှိုက်ကစ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ယုံကြည်ထားပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဘီဘီစီက ဆိုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် မီးတောင်မှပြာပူများ မှုတ်ထုတ်နေသဖြင့် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားရ
ဒီထက်မက အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီး အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝ ရအောင်ယူမယ် ဆိုတဲ့ မေဦး၊ ဟန်လင်း
ပြည်ပကြွေးမြီ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရေး မူဝါဒရေးဆွဲထားရန်နှင့် မလိုအပ်ဘဲ ချေးငွေ ကြိုထုတ်ထားခြင်း
ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ မိုင်းများကို ရှင်းလင်းရန် ယူရို ၁၀ သန်း ဂျာမနီသုံးစွဲမည်
ပါတီစည်းကမ်း တင်းကျပ်ခြင်းနှင့် အလှူငွေထည့် ဝင်ရခြင်းကြောင့် ဒီချုပ်မှ နုတ်ထွက်သည်ဆိုခြင?